Kenya: Afar Soomaali Ah Oo Maxkamad Loo Soo Taagay Weerar Ka Dhacay Garoonka Joma Kenyatta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa Isniintii lasoo taagay 4 nin oo Soomaali ah, kuwaas oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerar 16-kii bishii hore ee Janaayo ka dhacay makhaayad ku taalla garoonka caalamiga ah ee Joma Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Ragga maxkamadda lasoo taagay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay: Xasan Cabdi Maxamed, Maxamed Cismaan Cali, Yuusuf Warsame iyo Garaad Xasan Feer oo loo soo qabtay eedeymaha la xiriira weerarka oo dhacay 16-kii January 2013.
Nimanka ayaa lagu eedeeyay in ay geysteen weerar aan khasaare geysan oo ka dhacay garoonka, waxaa sidoo kale lagu eedeeyay in baabuurkooda laga helay waxyaabo qarxa oo culayskoodu gaaraya 2KM KG iyo meydka nin ay rasaas jirkiisa ka muuqatay.
Sarkaal u hadlay booliska la dagaallanka argagaxisada ayaa sheegay in eedeysaneyaasha ay haysteen warqadaha aqoonsiga Kenya, kuwaas oo uu sheegay in ay ku heleen si musuqmaasuq ah.
Booliska ayaa sheegay in qaraxa ay si wada-jir ah u qorsheeyeen afarta nin ee maxkamadda la soo taagay iyo kuwo kale oo aan weli gacanta lagu soo dhigin.
Dhageysiga dacwadda loo haysto raggan ayaa lagu ballansan yahay in dib loo furo Talaadada maanta.
Horay ayaa magaalada Nairobi waxaa maxkamada la horkeenay 4 Soomaali ah oo loo heysto weerarkii xarrunta ganacsiga Westgate ee oo ay ku dhinteen ilaa 67 ruux oo u badnaa rayid.